Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. युएस बंगला विमान दुर्घटना : शव नचिनेर आफन्त अलमलमा – Emountain TV
युएस बंगला विमान दुर्घटना : शव नचिनेर आफन्त अलमलमा
काठमाडौं, २९ फागुन । त्रिभुवन विमानस्थलमा सोमबार भएको युएस बंगला विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका ५१ जनाको शव महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ । शव बुझ्न अस्पतालसम्म पुगेका मृतकका कतिपय आफन्त आफैँ अचेत अवस्थामा छन् भने कतिपय शव नचिनेर अलमलमा परेका छन् ।
सर्लाहीका अवधेशकुमार यादव बुवाआमाको नजिकै आइपुगेर पनि उनले उनीहरुलाई देख्न पाएनन् । सर्लाहीदेखि छोरोलाई लिन आएका बुवाआमाले पनि आफ्नो छोरालाई ज्युँदो देख्न पाउने त टाढैको कुरा भयो, मृत्यु भएको छारोको शव चिन्नै नसकिने अवस्थामामात्र भेटे । भर्खर २१ वर्ष भएका थिए अवधेशकुमार । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएर उनी कतार गएका थिए ।
तर, भनेजस्तो काम नपाएपछि चार महिनामै उनी आफ्नै गाउँ फर्किएका थिए । त्यही अनुसार उनी सोमबार नेपाल आउँदै थिए । कतारबाट उनको ट्रान्जिट परेको थियो, बंगलादेशको ढाका । त्यहाँबाट उनी युएस–बंगलाको विमान चढेर काठमाडौंतिर आए । छोरो लिन आएका सर्लाही कविलासी नगरपालिका–३ का रामनारायण र सुमित्रादेवी अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको पेटीमा छोराको शव पर्खिरहेका छन । चार महिनाअघि कतार गएका अवधेशको घर छोड्ने बेला जन्मेकी उनकी छोरी चार महिनाकी मात्रै भएकी छन् ।
योङ ट्राभल एजेन्सी मार्फत बंगलादेशमा आयोजना भएको एक अवार्ड सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएकी काठमाडौँ निवासी सजना देवकोटाका आफन्त पनि त्रिवि अस्पतालमा भावविहल अवस्थामा थिए । सजनाको ९ वर्षीय छोरी छन ।
सोमबार भएको बंगलादेशी विमान दुर्घटनामा बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गरिरहेका १४ जना विद्यार्थी परेका थिए । ती मध्येका एक श्रेया झा पनि हुन । महोत्तरी घर भई हाल काठमाडौको बल्खुमा बस्दै आएकी २३ वर्षीय श्रेया डाक्टर पढ्न विदेश गएकी थिइन् । छोरी बिदामा घर फर्कदा परिवारमा खुसीको सीमा थिएन । श्रेया बङ्गलादेशको कुमुदिनी उमन्स मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस ५ औँ वर्षमा अध्ययनरत थिइन । उनको पढाई सकिन एक वर्ष मात्र बाँकी थियो । तर, उनको विमान दुर्घटनासँगै उनको जीवनमा पूर्णविराम लाग्यो । श्रेयाका बुवा लक्ष्मण झाको अनुहारमा पीडाको सीमा थिएन । उनी रसिलो आँखा लिएर शिक्षण अस्पतालमा छट्पटाइरहेका छन् ।
युएस बंगला एयरलाइन्सको विमान सोमबार दुर्घटनामा पर्दा २१ बंगलादेशी नागरिकको पनि मृत्यु भयो । ज्यान गुमाएका बंगलादेशी आफन्तको शव लिन बंगलादेशबाट मंगलबार दिउँसो टिचिङ अस्पताल पुगेका थिए ।
शिक्षण अस्पतालमा डिएनए परीक्षणसहितका प्रक्रिया पूरा गरेर आफन्तलाई शव बुझाउने प्रक्रिया हुनेछ । अस्पताल स्रोतका अनुसार विमानमा आगो लागेका कारण शव जलेकाले सनाखत गर्न मुस्किल हुने देखिएको छ । पोस्टमार्टम गर्दा पहिचान खुल्न नसक्ने शवहरुको डिएनए परीक्षण गरिने अस्पतालले जनाएको छ ।
समयमा काम नगरेको भन्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ